UNICEF ga-enye African Union ego Million 220 nke ọgwụ mgbochi J&J COVID-19
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » UNICEF ga-enye African Union ego Million 220 nke ọgwụ mgbochi J&J COVID-19
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Nkwekọrịta dị n'etiti UNICEF na Janssen Pharmaceutica NV ga -enyere aka mejupụta Nkwekọrịta Ịzụta Ọganihu (APC) nke ebinyere n'etiti African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) na Janssen na Maachị afọ a.
Janssen Pharmaceutica NV na-enye ọgwụ ruru nde 220 nke ọgwụ mgbochi otu J&J maka ndị otu 55 niile nke African Union ka ọ na-erule 2022.
Nkwekọrịta ahụ nwetara ohere ịtụrụ ọgwụ nde 180 ọzọ, na -eweta ohere kachasị ruo ngụkọta nde ọgwụ 400 na njedebe nke 2022.
Ọgwụ COVID-19 Janssen nwetara Ndepụta Ngwa Mberede WHO na Machị 12 ma dabere na netwọ ọkọnọ zuru ụwa ọnụ iji mepụta ọgwụ mgbochi ahụ.
UNICEF binyere aka na nkwekọrịta Janssen Pharmaceutica NV ihe ndekọ akụkọ ego inye ọgwụ ruru otu narị na iri abụọ na iri abụọ nke ọgwụ mgbochi ọgwụ J&J maka mba iri ise na ise nke otu mba Afrịka (AU) ka ọ na-erule ngwụcha afọ 220. A ga-ewepụta ihe dị ka nde iri atọ na ise n'ọgwụgwụ afọ a.
Nkwekọrịta dị n'etiti UNICEF na Janssen Pharmaceutica NV ga -enye aka mejuputa Nkwekọrịta Ịzụta Ọganihu (APC) bịanyere aka na ya n'etiti African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) na Janssen na Maachị afọ a. Nkwekọrịta ahụ nwetara ohere ịtụrụ ọgwụ nde 180 ọzọ, na -eweta ohere kachasị ruo ngụkọta nde ọgwụ 400 na njedebe nke 2022.
Ndị otu Afrịka guzobere AVAT na Nọvemba 2020 iji nyefee ọgwụ mgbochi COVID-19 na kọntinenti Afrịka, na ebumnuche nke ịgba ọgwụ mgbochi pasent 60 nke ndị obodo AU ọ bụla. N'okpuru atụmatụ a, Banklọ Mbubata Mbubata nke Afrịka (Afreximbank) na AVAT abịanyela aka na nkwekọrịta nkwado n'aha AU maka mmepe nke nkwa n'ihu (APC) iji kwado steeti ndị otu ịnweta ọgwụ mgbochi COVID-19. UNICEF ga-azụta ma nyefee ọgwụ mgbochi COVID-19 n'aha atụmatụ AVAT. Ndị mmekọ ndị ọzọ gụnyere Ụlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa Africa (CDC) na Bank World. Ọ bụ ezie na a na-atụ anya na ọtụtụ ọgwụ mgbochi ga-abụ akụkụ nke Pọtụfoliyo nke atụmatụ a, ọgwụ mgbochi otu mkpụrụ ọgwụ Janssen bụ nke mbụ agụnyere.
“Mba Africa ga-enwerịrị ohere dị ọnụ ala na ịha nhatanha ọgwụ mgbochi COVID-19 ozugbo enwere ike. Nnweta ọgwụ mgbochi ọrịa ezughị oke na ezighi ezi, na-erughị pasent 1 nke ndị bi na mpaghara Afrịka nwere ọgwụ mgbochi ugbu a megide COVID-19. Nke a enweghị ike ịga n'ihu, "Onye isi oche UNICEF Henrietta Fore kwuru. "UNICEF, yana ogologo akụkọ ogologo ya nke inye ọgwụ mgbochi gburugburu ụwa, na-akwado mbọ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 zuru ụwa ọnụ site na AVAT, COVAX, na ọwa ndị ọzọ iji bulie ọkọnọ na ịnweta ọgwụ mgbochi."
N'iji ọtụtụ afọ nke ahụmịhe dị ka onye na -azụ ọgwụ mgbochi otu kachasị n'ụwa niile dịka ọ na -eme kwa afọ maka ịgba ọgwụ mgbochi oge niile, UNICEF na -arụ ọrụ dị ka ụlọ ọrụ na -ahụ maka ịzụrụ ihe na ngwa agha n'aha mmekọrịta AVAT. UNICEF dị njikere ikwado n'ịzụta, mbupu na nnyefe nke ọgwụ mgbochi ọrịa ozugbo enwere ya yana mba ndị otu AU adịla njikere ịnata ha. N'inwe nnukwu ikike na ọtụtụ iri afọ nke nka na ijikwa ibu, mkpuchi na ibubata ọgwụ mgbochi ọrịa nke chọrọ nrube isi siri ike na ihe chọrọ oyi, UNICEF ga -arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ọgwụ mgbochi, ndị na -ebugharị ibu na ụlọ ọrụ na -ebugharị iji nweta doses na obodo ndị chọrọ ha.